ချစ်လိပ်ပြာ အချစ်စာပေ: လူနာကုတင် ၃၁ (အပိုင်း ၁)
လူနာကုတင် ၃၁ (အပိုင်း ၁)
ဒဂုံစင်တာရှေ့ဘက်ရောက်တော့ ကားကိုဖြည်းဖြည်းခြင်း အရှိန်လေးလျော့ချလိုက်တယ်။ ဘာကြောင့်မှန်း မသိပေမဲ့လမ်းဘေးမှာ ပန်းတွေရောင်းနေတာကိုတွေ့တော့ ပန်းလေး ၀ယ်သွားရင်ကောင်းမလားဆိုတဲ့ အသိလေးက၀င်လာလို့ပါ။
ကားစက်ကို ခဏရပ်ပြီး ကားပေါ်ကနေ ပန်းရောင်းနေတဲ့သူတွေဆီ အသာကြည့်နေမိတယ်။ ပန်းရောင်းနေတာကော ဟုတ်ရဲ့လားမသိဘူး ငါးရောင်းနေတာကြလို့ အတင်းအလုအယက်။ ၀ူးးးး.. ငါလဲခက်ပါပြီ မကြီးမငယ်နဲ့ ဒီအရွယ်ကြမှ ပန်းဝယ်ဖို့ စိတ်ကူးကပေါ်လာသေးတယ်။ မထူးပါဘူး ရောက်နေမှတော့ ၀ယ်သွားမယ်ဆိုပြီး ကားပေါ်ကဆင်းလာပြီး အနီးဆုံးနှင့် အစွန်က လူရှင်းနေတဲ့ ပန်းသည်ဆီ ခပ်သွက်သွက်သွားမိတယ်။
တခြားမဟုတ်ဘူး ပန်းသည်တွေ နင်လားငါလား အလုအယက် သူဆိုင်ဝယ်ပါ ငါ့ဆိုင်ဝယ်ပါနဲ့ အလွန်ရှက်ဖို့ ကောင်းတဲ့ ကိစ္စမို့ အစွန်ဆုံးဆိုင်ကို ရွေးလိုက်ရတာပါ။ အယ်..ဆိုင်ရှေ့မှာ လူတယောက်လုံးရောက်နေတာတောင် မမြင်ဘူး ပန်းရောင်းတဲ့ကောင်းမလေးက ပိုက်ဆံကို သေချာ ခေါင်းငုံ့ကုန်းရေနေတယ်။
ချောင်းလေးတချက် ဟန့်လိုက်တယ် ကြားမလားလို့ ..
မှားပြီလို့တွေးရင်း ရှက်လည်း ရှက်လာတာမို့မ၀ယ်တော့ဘူးဆိုပြီး လှည့်ထွက်မယ် အလုပ်...
“ဦးလေး ဦလေး ဆောရီးနော် ဆော်ရီးနော် သမီးမကြားလို့ပါ တောင်းပန်းပါတယ် လာပါ.. ဦးရယ် လာပါ… ဘာဝယ်မလဲ ပြော ”
ကျွန်တော် ဘာမှလည်း ပြန်မပြော တောင့်တောင့်ကြီးရပ် မျက်မှောင်ကုတ်ရင်း သူ့ကို ကြည့်လိုက်တယ်…
“လာပါ ဦးရယ် တောင်းပန်ပါတယ် ... သမီး.. တကယ်မမြင်လို့ပါ... လာပါ.. အားပေးပါအုန်း ဦးရယ်..”
“မဟုတ်ဘူး ဦးလက်မောင်းကို ကိုင်ထားတဲ့ လက်...”
“အိုးးးး.... ဆောရီးးး...ဟီးဟီး ဆောရီးနော်... လာ ဦးး ..”
ဘယ်လို မိန်းကလေးတွေမှန်းမသိဘူး တသက်နဲ့တကိုယ် မိန်းကလေးတယောက်က ဆွဲလားရမ်းလား ဒီလိုမဖြစ်ဖူးဘူး လက်ရဲ ဇာတ်ရဲတဲ့ မိန်းကလေးပါလား။ အသက်ကလေးကလည်း အလွန်ဆုံးရှိမှ၂၀ ရုပ်ကလေးကသနားကမားနဲ့ ဈေးရောင်းကောင်းဖို့ အဲလောက်ထိ မလိုဘူးလို့တော့ ထင်မိတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူပျိုကြီး ကျွန်တော့အဖို့ ရင်တွေခုန်သွားတာတော့ အမှန်ပဲ။
“ဘာပန်းယူမှာလဲ ဦးလေးက ပန်းတွေကတော့ အစုံပဲ...အဲ.. အရင်မေးရမှာက ပန်းက ဘုရားတင်မှာလား ...”
ဘုရားရှစ်ခိုးသလို လတ်အုပ်လေးချီ မျက်လုံးလေး ပေကလပ်ပေကလပ်နဲ့ ပြုံးပြီး မေးနေတော့လည်း တချက်ပြုံးမိတယ်.. ခေါင်းခါပြလိုက်တယ်....
“မဟုတ်ဘူး.... အော် ဒါဆို.. ဇနီးအတွက်လား... ”
မျက်လုံးလေး ပြူးအပေါ်ပင့် ဇက်ကလေးပုရင်း ပြောနေပြန်တယ်။
“ဟာ.....မဟုတ်ပါဘူး ငါက မိန်းမ မယူသေးဘူး ဟ...”
တခစ်ခစ်ရယ်ရင်း မျက်လုံးလေးထောင့်ကပ် မျက်မှောင်လေးကုပ် ပါးချိုင့်လေးပေါ်အောင် ပြုံးရင်း ...
“အော် သိပြီ ဦးလေးက လူပျိုကြီးကို ..ဟီးဟီး ဒါဆို.. ပန်းက ချစ်သူအတွက်ပေါ့ ဟုတ်လား..ဟီးးးးး ”
တယ်လဲတတ်နိုင်ပါလား ဟန်အမျိုးမျိုး အမှုယာအမျိုးမျိုးနဲ့ ပြောနေတာ ပန်းရောင်းဖို့မကောင်း သရုပ်ဆောင်သင်တန်းသွားလျှောက်ဖို့ကောင်းတယ်.. မေးနေလိုက်တာ လူကိုဇာတ်စုံကိုဖေါ်နေသလိုပဲ... လူကိုရှက်လာလို့ ဖိန်းကနဲဖြစ်သွားတယ်..
“ဘယ်ကလာ ချစ်သူရမှာလဲ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် ငယ်သူငယ်ချင်းလည်းဖြစ်တဲ့ မိန်းကလေး သူငယ်ချင်းတယောက် ဆေးရုံတက်နေလို့ အဲဒါ ဆေးရုံကို လက်ကြီးမသွားပဲ ဟိုလေ...ပန်းကလေးများဝယ်သွားမလားလို့ ...”
“အော် သိပြီ ဒီပန်းလေး တပွင့်ထဲယူသွား ဈေးတော့ နည်းနည်းကြီးတယ်နော် ဒါပေမဲ့ ဒီစတိုင်က အိုင်းရစ်(IRIS)ကိုရီးယားကားထဲ ဇာတ်လိုက်မင်းသားက မင်းသမီးလေးကို အဲလိုပေးတာ...”
“ဟာ ...ငါ ကိုရီးယားကား မကြည့်ဘူး တပွင့်တည်းယူသွားတော့ ကပ်စေးနည်းတယ် ထင်နေပါအုန်းမယ် ပေး ၁၀ပွင့်..”
ဇက်ကလေးပုရင်း... ဘာမှဆက်မပြောတော့ပဲ ပန်းလေးတွေကို အလှပလပ်စတစ်လေးနဲ့ သေချာ ပတ်စီးပြီး သေချာလုပ်ပေးနေတယ်။
“အော် ..ဟုတ်ကဲ့... ဒီမှာ ရပြီ ဦးလေး...”
သူတောင်းတဲ့ ကျသင့်တဲ့ ပိုက်ဆံလေး ရှင်းပြီး ပန်းဆိုင်က လှည့်ထွက်ကားဆီကိုလျောက်ထွက်လာတော့မယ်လုပ်တော့...
နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ရင်း ဘာလဲ ဆိုတဲ့ အကြည့်နဲ့ မေးဆတ်ပြလိုက်တော့..
“သမီး ဆီက ပန်းဝယ်သွားတဲ့ လူတွေတော်တော်များများ ထူးထူးခြားခြားဖြစ်တတ်သလို ကံလည်းကောင်းတတ်ကြတယ် ဦးလေးလည်း ကံကောင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်...”
မျက်နှာထား တည်တည်လေးနဲ့ပြောလာတော့ တချက်ပြန်ပြုံးပြရင်း ..
“ထူးခြားတာလည်း မလိုချင်ဘူး ကံကောင်းတာလည်း မလိုချင်ဘူး အဓိကကတော့ ၀တ္တရားအရပဲ.. ”
ဟုပြောရင်း ပန်းစည်းလေးထောင်ပြပြီး ထွက်လာခဲ့တော့တယ်။
လက်ထဲမှာကိုင်ထားတဲ့ ပန်းစည်းက တဖက် ကုမဏီကပေးလိုက်တဲ့ တင်မိုးနိုင်တက်နေတဲ့ ဆေးရုံလိပ်စာနဲ့ ကုတင်နံပါတ်ကို သေချာရှာမိနေတယ်။ ဆေးရုံကြီးတော့ ရောက်ပါပြီ ဘယ်နေရာပါလိမ့် ကုတင်နံပါတ်က ဘယ်လောက်လဲ... အော ဒီမှာ ကုတင်နံပါတ် သုံးဆယ့်တစ်ဆိုပါလား။ ဖြတ်သွားဖြတ်လာ သူနာပြုဆရာမလေးတယောက်ကို မေးတော့ အပေါ်ထပ်မှာဆိုလို့ အပေါ်ထပ်ကို တက်လာခဲ့တယ်။
ဆေးရုံဆိုတဲ့ နေရာမျိုးဟာ လူမလာသင့်တဲ့ အရပ်ဆိုတာ သိပ်မှန်တာပဲ ၀င်ကတည်းက အနံ့အသက်က မကောင်းရတဲ့ ကြားထဲလူနာပေါင်းစုံကို မြင်ရတော့ စိတ်ထဲမှာ ကျဉ်းကြပ်လာသလိုပဲ။ ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လို တင်မိုးနိုင် ဆေးရုံရောက်နေတာလဲ၊ ဘာဖြစ်တာလဲ ကုမဏီကလူတွေကို မေ့ပြီးမမေးလိုက်ရဘူး။ သူလည်း ကျမ္မာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါင်ဒေါင်မြည်ပါ။
ငယ်ငယ်ထဲက ပြောမနာဆိုမနာပေါင်းလာတဲ့ သူဆိုတော့ သူအကြောင်းအကုန်သိတယ်။ စိတ်သဘောထားကောင်းတယ် ဆိုပေမဲ့ ဇတ်ဇတ်ကျဲ ပေါက်ပေါက်ဖောက်သလို စကားပြောသလို လူတဖက်သားကိုလည်း တအားအပြစ်မြင်တတ်တယ်။ တော်ရုံလူသူ့ကို အပေါင်းအသင်းမလုပ်သလို သူကလဲ သိပ်အပေါင်းအသင်းမများလှ။ ရုပ်ရည်လေး အသင့်အတင့်ရှိတာ ဒီအရွယ် ၃၅ကျော်တာတောင် အပျိုကြီးဘွဲ့ကို ဆက်လက်သယ်ပိုးနေတာသာ ကြည့်တော့။ တွေးရင်း ကျောင်းတုန်း အတူသွား အတူလာ စကြနောက်ကြ အလုပ်လုပ်တော့လည်း အတူတူ တခါတလေ မတည့်တာများတယ်။ တွေးရင်းနဲ့ အနီးဆပ်ဆုံး ကုတင် နံပါတ်ကို သွားတွေ့တယ်။ ကုတင်နံပါတ် ၂၉တော့တွေ့ပြီ ဟော ဟိုဘက်က တကုတင်ကျော်က သူဖြစ်မယ်။ ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်လှန် စောင်လေးခြုံထားပြီး မျက်နှာကျက်ကို တွေတွေကြီး ကြည့်နေတယ်။ ကျွန်တော် သူ့ကုတင်နားကပ်သွားတော့ ကျွန်တော့်ကို မြင်သွားပြီးတော့မှ ...
“ဟယ်.... မျိုးကျော် .. မသာ.. ကြည့်စမ်း ဘယ်တုန်းကရောက်တာလဲ ငါ့ဆီလာတာလား...”
သူတော်တော်ဝမ်းသာသွားပုံရပါတယ် ကြည့်ရတာ လူပေါင်းမတတ်တော့ လူနာကြည့် သိပ်လာကြတဲ့ ပုံမပေါ်ဘူးထင်တယ်။
“အေး.... ရောက်တာ ၃ ရက်ရှိပြီ ရောက်ရောက်ခြင်းနင့်သတင်းတော့ ကြားတယ် ချက်ချင်းလာမလို့ပဲ ဌာနချုပ်ကို သတင်းပို့ နေရတယ် နင်သိတဲ့ အတိုင်း ၀ိုင်းလေးဘာလေး လုပ်ပေးနေရတာနဲ့ ဒီနေ့မှလာရတယ် ”
“ဘယ်လိုလဲ တရုတ်ပြည်မှာ ပျော်ခဲ့ရဲ့လား ၅ လတောင် ဆိုတော့ ပိုက်ဆံတွေလည်းရ ကောင်မလေးချောချောလေးတွေနဲ့ရော ဆုံခဲ့သေးလား..”
“ဟာ နင်ကလည်း ငါ့အကြောင်း သိရက်နဲ့ .. ဟိုမှာ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ သွားတာကို... ဒီလိုပါပဲ.. ဒါနဲ့ နင်ကဘာဖြစ်တာလဲ ဆေးရုံတက်ရလောက်အောင် ဘာရောဂါလဲ ”
“ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးယာ အကျိတ်ကနေဖြစ်တဲ့ သွေးစုနာပုံစံ ဖြစ်တာပါ ..”
“အမ်..ဘယ်မှာ ဖြစ်တာလဲ လည်ပင်းမှာလား... ဟင်းး.. လည်ပင်းမှာလဲ မရှိပါဘူး ..ဂျိုင်းမှာလား... ”
“ဟေ့.. မျိုးကျော် ငါ့အတွက် ဘာပါလဲ လက်ဆောင် ..ငါ့အတွက်လက်ဆောင် မပါလို့ကတော့ နင်အသေပဲ နော် နင် ငါ့အကြောင်း သိတယ်နော် ”
“အေး ဟုတ်သားပဲ နင်ပြောမှ သတိရတယ်... လက်ဆောင်တော့ အိမ်လာလည်မှ ပေးတော့မယ်ဟာ ခုပါမလာဘူး အလုပ်ထဲကလာတော့လေ ဒီမှာ ခုလောလောဆယ် ပန်းတော့ပါတယ်ဟ... ဟီးဟီး”
“ဟွန်း....ဒါပဲနော် အိမ်လာရင် လက်ဆောင်ယူခဲ့ ..”
“ဒါနဲ့ နင့်အမေကော လာမစောင့်ဘူးလား ”
“အယ်... နင်မလာခင်လေးတင် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အောက်ဆင်းသွားတာ အပြင်မှာ ဆေးသွားဝယ်တယ်လေ.. တချိန်လုံး ငါ့အနားမှာဟ မေမေက ”
“ဆေးရုံကနေ အပြင်သွားကို ဆေးဝယ်ရတယ် ...”
“တိုးတိုးပြောပါဟယ် အသံပြဲကြီးနဲ့ ကြားသွားအုံးမယ်...”
“နင်တို့ကလည်း အပြင်က အထူးကုတွေဘာတွေမှာ တက်တာမဟုတ်ဘူး ..”
“ဟာ... နင့်လို မချမ်းသာဘူးဟဲ့ အကောင်ရဲ့”
“ဟဟဟ ... ငါသိပါတယ် နင်ကိုကလည်း တအားကပ်စေးနည်းနေတာလဲ ပါပါတယ်ဟာ..”
“ ဟွန်း.. နင်ကတော့ ပြောပြီ ....”
“စတာပါဟာ ကဲ ငါဘာကူညီပေးရမလဲ ... ကဲပြော”
“ဘာမှမလိုပါဘူးဟာ ... ဒါပေမဲ့ ခုလောလောဆယ် ရေဆာနေတယ်... ”
“အိုကေ ဘယ်မှာလဲ စားပွဲပေါ်က ရေဘူးထဲကလား”
ရေဘူးထဲမှ ရေကို ခွက်ထဲကို ထည့်ပေးပြီး ....
“ကဲ ထသောက်တော့ ”
“အမ် ခွဲစိတ်ခန်းဝင်ထားတာမှ မနေ့က .. နာနေတုန်း မထနိုင်ဘူး အိပ်ရင်းပဲ သောက်မယ်..ငါသောက်နေကျ”
“ဟာ.. နင်ကတော့ ရစ်ပြီ... နင်ကလေးလား ထသောက်ဟာ...”
“ပေးရေခွက်... ငါ့ဘာသူ အိပ်သောက်သောက် မှောက်သောက်သောက်..”
ပြောရင်း ကျွန်တော့်လက်ထဲမှ ရေခွက်ကိုယူပြီး အိပ်ရင်း ဖြည်းဖြည်းခြင်း သောက်နေလေပြီ...
ရေသီးလေပြီ.... ရေတွေရင်ဘက်ပေါ်ဖိတ်စင်ကုန်တာထက် သူမှာ ရေသီးတာကို မချည့်မဆံခံနေရပြီ..
“ငါပြောပါတယ်.. မသောက်ပါနဲ့လို့ ပြောရဲသားနဲ့..”
လက်လေးကျောအောက်အသာ လျိုဝင်ထူမပြီး ကျောကို အသားထုရင်း သူဘေးက သဘတ်စောင်ကလေးနဲ့ မျက်နာကိုသုတ် ရင်ဘက်ပေါ်မှာ ကျနေတဲ့ရေတွေကိုပါ သုတ်ပေးနေတုန်း တာဝန်ကျဆရာဝန်မ နဲ့ သူနာပြုဆရာမတို့ ၀င်လာလေသည်။
“ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်ကြတာလဲ အစ်မရဲ့ ...”
ပြုံးပြုံးနှင့် ဆရာမလေးက ခပ်ငယ်ငယ်ရယ် ပါ။ ငယ်တယ်ရယ်မဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော်တို့က ၃၅ အကျော်တွေဆိုတော့ ကိုယ့်ထက်တော့ငယ်တာ အမှန်ပါ။
“ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး ဆရာမ ရေသောက်ရင်း သီးတာပါ ..ဟီးဟီး ”
ကျွန်တော်လည်း ရောရောင်ပြီး လိုက်ရယ်မိတယ်။ ဆရာမက ကျွန်တော့်အားကြည့်ရင်း ..ရယ်လျက် ...
“ဘာမှမပူနဲ့ သိလား နောက် ၃ ရက်လောက်ဆို အနာကျက်ပြီး ဆေးရုံက ဆင်းလို့ရပါပြီး သိလား”
“ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာမ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..ခင်ဗျာ.”
ဟိုက် ..ငါဘာတွေပြောနေတာလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တွေကော ဘာတွေကော ဟီးဟီးး..
“ကဲ ဆရာမရေ ...”
တာဝန်ကျ ဆရာဝန်မလေးက သူနာပြုဆရာမလေးကို ပြောလိုက်သည်နှင့် သူနာပြုဆရာမလေးက ဘေးမှ လိုက်ကာတန်းစီးကို ဘေးကလူတွေ မမြင်အောင် ဆွဲဆန့်ကာထားလိုက်ပြီးသည်နှင့် တပြိုင်နက် ဆရာဝန်မက ဖျက်ကနဲ့ တင်မိုးနိုင် ကိုယ်ပေါ်က စောင်နဲ့ အတူ အောက်ကထမီကိုပါ ဆွဲလှန်လိုက်တော့ ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှ ရှောင်ချိန်မရလိုက်သလို တင်မိုးနိုင် ကိုယ်တိုင် မှင်သက်မိနေပြီး ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်နေပြီးမှ မျက်လုံးကို မှိတ်ထားတယ်။ ခုမှသဘောပေါက်တယ် တာဝန်ကျဆရာဝန်မက ကျွန်တော်တို့ကို တကယ့်အိမ်ထောင်သည်ကြီးတွေ ထင်နေမှာပေါ့ ဒီအသက်အရွယ်တွေဆိုတော့လည်း ... ကျွန်တော်လည်း မရှောင်သာတာကတကြောင်း မထူးတော့ပြီမို့ ဆက်ကြည့်နေမိတော့တယ်။
ကျွန်တော်ကြည့်ရင်း မျက်လုံးတွေ ဝေတက်လာတယ် မတ်တပ်ရပ်နိုင်တဲ့ အင်အားတောင် မရှိချင်တော့လို့ပါ မိန်းကလေးရဲ့တန်ဆာဆိုတာကို ဗီဒီယိုထဲမှာပဲ မြင်ဖူးပေမဲ့ ဒီအသက်ဒီအရွယ်ထိ ခုလိုနီးနီးကပ်ကပ်ကြီးတခါမှ မမြင်ဖူးတော့ ရင်တွေတုန်တက်လာသလို ခြေဖျားလတ်ဖျားတွေ အားမရှိသလိုလို ခံစားလာရတယ်။ ပေါင်ရင်းတည့်တည့်မှာ ဖြစ်တဲ့ သွေးစုနာကြောင့်ခွဲစိတ်ထားခါနီး အမွှေးတွေကို ရိတ်ထားဟန်တူပါတယ်။ ရိတ်ပီး သေသပ်သပ်ရှိတဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို ပေါင်အနေတော်ကားထားတော့ အထင်းသားမြင်နေရတယ်။
နဂိုထဲကမှ တင်မိုးနိုင်က အသန့်သမားမိန်းကလေးကလည်း ဖြစ်ပြန်တော့ သူ့အသားအရေတွေ သူ့ပစ္စည်းလေးကို သေချာကြည့်ပြီး အပြစ်တောင် ရှာမရတော့ဘူး။ အသက်သာ ၃၅ ရောက်နေပြီး တကယ့်လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကြီးပဲ အားလုံးအသစ်ကြီးရှိသေးတာပဲလို့ တွေးနေမိတယ်။ မျက်လုံးက အဲဒီကနေကို မဖယ်နိုင်တော့ဘူး။ သေချာကြည့်လေ ချစ်စရာအက်ကွဲကြောင်းလေးထဲကနေ အတွင်းသားနီနီရဲလေးက ကိုယ့်ကိုလက်ချောင်းလေးနဲ့ တို့ကြည့်ပါလားလို့ ညို့ယူဖမ်း ခေါ်နေသလိုလို။ ငါမကြည့်သင့်ဘူး သူဒီလို ဖြစ်နေတာ။ ငါအခွင့်အရေးသမားလို့ တင်မိုးနိုင်ထင်သွားမလားပဲ။ ဒါပေမဲ့ ငါသာမျက်နှာလွှဲထားရင် ဆရာမတွေသဘောပေါက်ပြီး အဲဒါမှ တင်မိုးနိုင်အတွက်ပိုရှက်ဖို့ကောင်းသွားမှာ။ ဒီအတိုင်းလေး မသိလိုက်ဖာသာနေတာမှ သူ့အတွက်ကောင်းပါတယ်လေ။
“ကဲ..အနာကတော့ စိတ်ချရပါပြီ ...ဘာမှမပူနဲ့ နောက် ၃ရက်ဆို ဆေးရုံကဆင်းရပြီ”
ဆရာမကသေချာကြည့်ပြီး တင်မိုးနိုင်အား ထမီနဲ့ စောင်ကို ပြန်ခြုံပေးနေတယ်။
“ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ..”
“ကဲ ဆရာမတို့ ဟိုဘက်သွားကြည့်အုန်းမယ်နော်..”
အဲဒါမှ ပြဿနာစတက်တော့တယ် နှစ်ယောက်ထဲ ဘယ်လိုပုံစံ အတူတူနေမလဲ ထွက်ပြေးချင်တဲ့ စိတ်တွေခုမှ ပေါက်လာတော့တယ်။ တင်မိုးနိုင်ကတော့ မျက်စိလည်းမှိတ်ထားရတဲ့ ကြားထဲမျက်နာပါ ဟိုဘက်ကို လှည့်ထားတယ်။ မျက်နှာလည်း နီရဲနေတယ်။ တော်တော်ရှက်နေပုံ ရတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဆက်မနေသင့်တော့ဘူး ထင်တာနဲ့..
“တင်မိုးနိုင် ....ငါ....ငါ ပြန်တော့မယ်နော် ...အဒေါ်လာရင်ပြောလိုက်ပါ ငါလာသွားတယ်လို့ ”
လှည့်မကြည့်ပဲ ခေါင်းငြိမ့် အေးအေး လုပ်နေတယ်.။ ကျွန်တော်လည်း ထွက်မယ်လုပ်ပီး သူ့ကို ကျောပေးရင်း စိတ်ထဲနောက်ထပ်ဘာပြောရင်ကောင်းမလဲလို့ စဉ်းစားနေတယ်။ သူစိတ်သက်သာရာ သက်သာကြောင်းလေး.. အို မထူးပါဘူး....။
“ငါတောင်းပန်ပါတယ်ဟာ... ငါလဲ သိဘူးလေ...”
“ဟာ... မသာ..မသွားသေးဘူးလား နင်သွားတော့ ဘာမှဆက်မပြောနဲ့ ခုထွက်သွားတော့ ....”
သူတအားစိတ်ကြီးတယ် ကုတင်ကို လက်နဲ့ ထုတာ ဘုံး ကနဲပဲ... ကျွန်တော်လည်း လှည့်ထွက်လာတော့တယ်။ ဆေးရုံအခန်းအပြင်ရောက် သိတိုင်အောင် ခြေထောက်တွေမြေကြီးချမိရဲ့လားလို့တောင် ထင်မိတယ်။ လေပေါ်လွင့်နေနေသလိုပါပဲ။ ငါဘာတွေမြင်မိပါလိမ့်နော်။ ကိုယ့်ကိုကို တအားကို ရီချင်သလိုလိုကြီး။ ထီပေါက်တဲ့ လူတယောက်လို ပျော်သလိုလို ထီပေါက်ပြီး ထီလတ်မှတ်ပျောက်သလိုကြီးမို့ ထလည်းမခုန်ချင်ပေမဲ့ ခုန်ဆွခုန်ဆွတော့ ဖြစ်ချင်နေတယ်။
ရင်တွေခုန်တာ အခုထိတောင် ပါလာတုန်းပဲ ၀ူးးး တင်မိုးနိုင်ရေငါတော့ သွားပါပြီထင်တယ်။ မျက်လုံးထဲမှာမြင်သမျှ မည်းမည်းပဲ မြင်နေတော့တယ်။ သူရဲ့ပစ္စည်းလေးကို မျက်လုံးရှေ့ကကို ထွက်ကိုမသွားတာ။ နောက်တခေါက်လောက်တောင် ကြည့်ချင်လိုက်တာ..။
စိတ်ကြီးညစ်ရပါပြီ... တသက်နဲ့တကိုယ်မဖြစ်ဖူးဘူး... ဘယ်နှယ်င့ါကျမှဖြစ်ရတယ်လို့ မိန်းကလေးတို့ရဲ့ အလုံခြုံဆုံးနေရာကိုမှ ဟိုကောင်က မြင်သွားတာလဲ။ စိတ်ညစ်တယ် စိတ်ညစ်တယ် သေသာသေချင်လိုက်တော့တယ် မိတင်မိုးနိုင်ရယ် လို့.. ကိုယ့်ကိုကို ပြန်ပြောနေမိတယ်။ ငါကိုက အသုံးမကျတာ အရင်နေ့တွေ ဆရာမတွေလာရင် ဒီလိုစစ်နေကျပဲ သူ့ကို အသိပေးအပြင်မထွက်ခိုင်းမိတာပါလိမ့်နော်... တော်တော်အသုံးမကျတဲ့ ငါပါလား ပြောရင်းကိုယ့်ကိုစိတ်တိုလာသလို ဟိုကောင် မျိုးကျော် သူ ငါ့ဟာလေးကိုသေချာ ကြည့်နေမှာပဲ..ဟာ..ပါးကြီးကို ရိုက်ပစ်ချင်လိုက်တာ ပြောလေပြောလေ သူဟာလေးက ယားလာသလိုလို ကျုံ့သွားလိုလို ကျယ်လာသလိုလို ဟာ.... ဘယ်နှယ်ဟာလဲနော် ငါ့နှယ် ရှက်ဖို့ကောင်းရတဲ့အထဲ ရင်ကခုန်နေသေးတယ်။ သေစမ်း ငါ ဒီကောင့်ကို ဘယ်တော့မှ မတွေ့တော့ဘူး သူငယ်ချင်းမတော်တော့ဘူး ငါ့ကိုငါ ကတိပေးတယ်။ ဟယ်.....ကြည့်အုန်း ခုမှ စဉ်းစားမိတယ် ဒီကောင် မျိုးကျော် ခုမြင်ခဲ့တာတွေ ရုံးကိုရောက်ရင် လူစုံပြောပြအုန်းမလား မသိပါဘူး ဟယ် သေပါပီ... ဒီသတင်းပေါက်လို့ကတော့ သတ်မှာ ဒီကောင့်ကို သတ်မှာ..ဟာ... စိတ်ညစ်လိုက်တာနော်..။
ခရီးက ပြန်လာပြီးကတည်းက တင်မိုးနိုင်နဲ့ တွေ့ရတာ ဒီတစ်ခါပဲ ရှိသေးတယ်။ ခုမတွေ့ရတာ ၄ရက်တောင်ကျော်ပြီ။ အလုပ်ကို ခုထိလည်းမလာသေးဘူး။ သူ့ဌာနကို သွားမေးကြည့်တော့လည်း နောက်ထပ်ခွင့် ၁၀ရက်တောင် ယူထားတယ်တဲ့။ ဒီကိစ္စလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အလုပ်ကနေတော့ မထွက်ပါနဲ့ တင်မိုးနိုင်ရယ်။ သူ ငါ့ ရှက်ပြီးမလာရတာလား မသိပါဘူး။ ငါလည်းခက်ပါပြီ ဟိုဟာကြီး မြင်ပြီးကတည်းက တင်မိုးနိုင် ဟာလေးရော တင်မိုးနိုင်ကိုပါ အတွေးထဲကကိုထုတ်မရတာ။ သူ့ကိုပဲ တွေ့ချင်နေတော့တယ်။ ငါ့စိတ်တွေ အကုန်လုံးကို နင်က သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီ .. တင်မိုးနိုင်ရေ။ အလုပ်လုပ်ရတာလဲ စိတ်က မပါတော့ဘူး။ အော်..ဟုတ်ပြီ တရုတ်က၀ယ်လာတဲ့ လတ်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ သူ့ကိုသွားပေးရမယ်၊ တခုခုတော့ ထူးခြားမှာပဲ။ နေအုန်း ငါလုပ်နေတဲ့ ပုံက သောက်ရှက်မရှိတဲ့ နှာဘူးကောင်များ ဖြစ်နေပြီလား မသိပါဘူး။ ဒုက္ခပဲ.... ဟာဖြစ်ဖြစ်ကွာ... မတတ်နိုင်ဘူး တင်မိုးနိုင်ရေ ငါတော့ နင့်ရှက်ရှက်ကို မြင်ပြီးကတည်းက အရှက်ကို လုံးဝမရှိတော့ဘူးဟေ့... ငါလာပြီဟေ့..။
တင်မိုးနိုင်ဆီသွားရင်း သတိတချက်ရသွားတယ်။ ဟာ ... ဟုတ်သားပဲ ဟိုအပေအတေမလေး ပါးစပ်ဆော့လိုက်တာ ငါမှာ ရင်တသက်မောစရာကြီး တွေ့ရတာ သူ့ကျေးဇူးမကင်းဘူး ထင်တယ်။ ဟုတ်ပြီ ကားကလည်း တလမ်းကြောင်းထဲ ဖြစ်နေတာနဲ့ သူ့ဆီအရင်ဝင်ရမယ် ဆိုပြီးကားလေးကိုဒဂုံစင်တာရှေ့ အမြန်မောင်းသွားတော့တယ်။ ရောက်တာစောလို့နဲ့တူတယ် ဆိုင်တောင်မဖွင့်သေးတာလား မဖွင့်တာလားမသိဘူး။
ဟောတွေ့ပြီ အပေအတေလေးလာနေပြီ အံ့မယ်ဘေးမှာလည်း တယောက်နဲ့ လက်လေးချိတ်လို့ အတော်အဆင်ပြေနေပုံရတယ်။ ကျွန်တော့ကား မြင်ပြီးမှတ်မိသွားဟန်တူပါတယ်.. ကျွန်တော့ဆီပြေးလာတယ်။
“ဟယ်...ဦးလေးကြီး... ပန်းလာဝယ်တာလား သမီးဒီနေ့ပန်းမရောင်းဘူးဗျ အမေပဲရောင်းတယ် ဟိုးဘက်အစွန်မှာလေ ဘာပန်းဝယ်မလဲ ၀ယ်ပေးမယ်....”
“ဘာမှမ၀ယ်တော့ဘူး... နင့်ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလာပြောတာ ဟဲဟဲ...”
“ဟိုနေ့က နင့်ဆီက ၀ယ်သွားတဲ့ ပန်းကလေး နင်ပြောတဲ့ အတိုင်းပဲ ထူးထူးခြားခြားဖြစ်သလို ကံကလည်း ကောင်းလိုက်တာ ပြောမနေနဲ့ ... ဟဟဟ”
“ဟုတ်လား ဘယ်လိုကံကောင်းတာလဲ ဦးလေးချစ်သူဆီက အဖြေရတာလား ဒါမှမဟုတ် လက်ဆောင်ရလို့လား ”
“အယ် ..ဘယ်လိုပြောရမလဲ ဟီးးး ဒီလိုပါပဲ..”
“နင်လည်းကံကောင်းနေတယ် မဟုတ်လား ဘေးမှာလည်း ဘော်ဒီဂတ်တွေ ဘာတွေနဲ့ ဆိုတော့ အတော်ပျော်နေတယ်ထင်တယ်.. ”
“ဟုတ် ဦးလေး အဲဒါသမီးချစ်သူလေ... ခိခိ..”
“ကဲပါ ဦးလေးသွားစရာရှိလို့ နင့်မြင်တာနဲ့ ကားရပ်လိုက်တာ နောက်မှာ ပန်းလာဝယ်မယ်နော်.. ”
“ဦးလေး တကယ်နော် ..နောက်နေ့ ပန်းတွေလာဝယ်နော် ..သမီးမရှိလည်း ဟိုးဘက်က အစွန်က သမီးအမေပဲ .. ၀ယ်လို့ရတယ် အားပေးရမယ်နော်”
“အေးပါ အေးပါ ...” ဟုပြောရင်း တင်မိုးနိုင်အိမ် ရှိရာ လမ်းဘက်ကို ကားလေး မောင်းထွက်လာတော့တယ်။
စိတ်တိုတိုနဲ့ ခွင့်ကို ၁၀ရက်ယူပစ်လိုက်မိတာ မှားသလိုဖြစ်နေပြီလား မသိတော့ပါဘူး။တချိန်လုံး မျိုးကျော်အကြောင်းပဲ တွေးတွေးမိဖို့ နေရသလို ဖြစ်နေပြီ။ ငါ့စိတ်တွေမှု မမှန်တော့တာလား မသိပါဘူး။ စိတ်ကို အငြိမ်ဆုံးထားပြီး သေချာစဉ်းစားမိတယ်။ ငါ့ဘ၀ကို ထူးချွန်ထက်မြတ်တဲ့မိန်းမ အများကလေးစားရတဲ့ မိန်းမဖြစ်အောင် ရာထူးရှိတဲ့ မိန်းမဖြစ်အောင် ငါ့မှာကြိုးစားလိုက်ရတာ အပျိုကြီးဆိုတဲ့ ဘွဲ့တောင်ရမှန်မသိရခဲ့ ရတာသာကြည့်တော့။
ဒီကြိုးစားခဲ့ရတဲ့ အချိန်အတွင်း လင်ယူသားမွေးမပြောနဲ့ ယားလို့တောင် လက်ကြားမလျိုခဲ့ဘူး ကိုယ့်ကိုကို မလိမ်တမ်းပြောတာပါ။ ခု ဒီဘာမဟုတ်တဲ့ ကိစ္စလေးကြမှ ငါစိတ်တွေ ယိုင်တောင် လဲချင်နေပါလား ပြန်စဉ်းစားမိတိုင်း ကိုယ်တွေ လက်တွေ ဖိန်းကနည်း ဖိန်းကနည်း ဖြစ်လာသလို။ အောက်က ဟာလေးကလည်း အရေကိုရွှဲရွှဲတက်လာတယ်။ တွေးရင်း မိမိလက်က သူ့အလိုလို သွားသွားစမ်းမိနေတယ်။ ဟယ်.. ငါဘာတွေလုပ်နေတာလဲ ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ အိပ်ယာထဲမှာ ငုပ်တုပ်ထထိုင်လိုက်တယ်။ ထမီလေးကိုအသာဖြီပြီး ငုံကြည့်မိတယ်။ အယ်..အမေ ၀င်လာလို့တွေ့သွားမှဖြင့်။ အသာဖြည်းဖြည်းထ အခန်းတံခါးကို ဖွင့်ကြည့်တယ် အမေ့ကိုမတွေ့။ အိမ်အပြင် ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ အမေရယ် အိမ်ရှေ့မှာ ပန်းပင်တွေ ရေလောင်းနေတာကိုတွေ့တော့ အသာလေး အခန်းထဲ ပြန်ဝင် အခန်းကို လော့ချ မှန်းတချပ်ယူပြီး ကုတင်ပေါ် ပြန်တက်ထိုင်လိုက်တယ်။
ကုတင်ပေါ်ရောက်တော့ ထမီကိုချွတ် ပေါင်းကားထားလိုက်ကာ ရှေ့နေ မှန်နဲ့ ကိုယ့်ဟာကို သေချာပြန်ကြည့်နေမိတယ်။ ဟိုကောင်မျိုးကျော် မြင်သွားတာ ဒီပုံစံနဲ့နေမှာ ဆရာဝန်မလာတော့ သူငါ့ခြေရင်းမှာ တည့်တည့်ကြီး သေပါတော့ဟယ်..။ ကြည့်စမ်း ဟတ်တက်ကွဲနေတာလေးကို ရုပ်က ဆိုးရတဲ့ကြားထဲ ရွှံစရာကြီးကို တွေးနေရင်း လက်ညိုး လက်ခလယ်လေးနှင့် အသာဖြဲကြည့်လိုက်မိတယ်။ အရည်လေးတွေတောင် စို့နေပါရောလား ထိပ်က အစိလေးက အသာပွတ်ကြည့်မိနေတော့သည်။ မှန်းလေးဘေးကို ချ ပြန်လှဲနေရင်း လက်က မိမိဟာလေးနေရာက မဖယ်နိုင်တာကြောင့် အထပ်ထပ်ပွတ်မိနေတော့တယ်။ လူတကိုယ်လုံးကို တွန့်ကနဲ တချက်ချက်ဖြစ်သွားသည်။ အချိန်နှင့် အမျှ မိမိလက်က အရမ်းကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပွတ်မိနေတော့ သတိဝင်လာပြီး မိမိကိုယ်ကို ရှက်စိတ်ဝင်လာသလို မုန်းလဲမုန်းလာတယ်။ ငါဘာတွေလုပ်နေတာလဲ မိတင်မိုးနိုင် နင် အရှက်မရှိတဲ့ မိန်းမတယောက်လား။ ကိုယ့်ဘာသာတယောက်ထဲ တောက် ခေါက်မိနေတယ်။
ဟယ် ဒုက္ခပဲ ....ပြေနေတဲ့ ထမီကို အမြန်ပြန်ပြင်ဝတ်ရင်း
“ရှင်..... အမေ ဟုတ်ကဲ့ သမီးလာပီ..”
သူခိုးလူမိသလို ဖြစ်နေပြီ။ ပြာပြာသလဲနှင့် တံခါးဆီ အမြန်ထပြေးမိတော့ ပေါင်ရင်းက စစ်ကနဲ နာသွားလို့ အောင့်အီးပြီးဖြည်းဖြည်းခြင်း လမ်းလျောက် တံခါးဖွင့်လိုက်တော့
“သမီး... အပြင်မှာ မောင်မျိုးကျော် ရောက်နေတယ်...”
“ဟာ... အမေ သမီးနေမကောင်းသေးဘူးလေ.. ဘယ်သူနဲ့မှ မတွေ့ချင်ဘူး..”
“သမီးကလည်း စောစောက အကောင်းကြီးပါ ..မောင်မျိုးကျော် အားနာစရာကြီး...”
“ဟင့်အင်း အမေ သမီးမတွေ့ချင်ဘူး....”
“သမီးကလည်း ဟိုမှာ လက်ဆောင်တွေ တပုံကြီးပဲ ...ဟီးဟီး ”
အမေလုပ်သူက လတ်ဆောင်တွေအများကြီးပဲ ဆိုတဲ့ စကားကြတော့ အပြင်လူမကြားအောင်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ဟန်လုပ်တိုးတိုးလေးပြောနေသည်။
“လာပါ သမီးရယ်.... ”
ဆိုပြီး တင်မိုးနိုင်လက်ကို ကိုင်အခန်းအပြင်သလို့ ဆွဲထုတ်ခေါ်လာတော့ တင်မိုးနိုင် မလိုက်ချင်လိုက်ချင်နဲ့ ပါလာတော့တယ်...
“မောင်မျိုးကျော်ကို အားနာလိုက်တာကွယ် မင်း သူငယ်ချင်းက နေသိပ်မကောင်းသေးဘူးကွဲ့ ..သမီးက သူငယ်ချင်းအချင်းဘာတွေရှက်နေလဲ မသိပါဘူးကွယ် မနည်းအပြင်ဆွဲထုတ်ရတယ်.. ဟီးဟီး..”
ဟု မျက်နာကို မဲ့ပြီး ဟိုဘက်လှည့်နေတယ်။
“ရပါတယ် ဒေါ်ဒေါ် ကျွန်တော်လည်း တရုတ်က ပြန်လာတော့ သူ့ဖို့ ရယ် ဒေါ်လေးဖို့ ရယ် ၀ယ်လာတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေကို ပေးချင်လို့ တမင်သက်သက်လာခဲ့တာပါ..”
“အေးပါကွယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒေါ်လေးကို ပေးမယ့် ပစ္စည်းတွေ သမီးကိုပေးခဲ့နော် ဒေါ်လေး ဟိုဘက်အိမ်ကို အလှူကိစ္စလေးသွားမေးစရာရှိလို့ ခဏသွားအုန်းမယ် သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်စကားပြော နေအုန်းနော်...”
“အမ်... အမေ ဘယ်သွားမလို့ လဲ.. မသွားနဲ့ သမီးနေမကောင်းတဲ့ ဥစ္စာကို..”
“နင်ဘာဖြစ်နေတာလဲ အရင်လဲ နင်တို့တွေ ဒီလိုစကားပြောနေကြပဲ ဟာကို ဘာဖြစ်တာလဲ မောင်မျိုးကျော် သားတို့ ရန်တွေဘာတွေများဖြစ်ထားလား ကွယ်..”
“ဟာဟ ..ဒေါ်လေး ကျွန်တော်တို့ ရန်မဖြစ်ပါဘူး ...သူကျွန်တော့်ကို စိတ်ကောက်နေတာ တရုတ်က ပြန်လာလာချင်း သူ့ဆီကိုမလာလို့တဲ့ အဲ ဒါကြောင့်ပါ..”
“ဒါလေးများ စိတ်ကောက်စရာလား မိတင်မိုးနိုင်တို့တော့လေ ငါမပြောလိုက်ချင်ဘူး... ကဲ မောင်မျိုးကျော် အဒေါ်ခဏ သွားအုန်းမယ်..”
“ဟုတ်ကဲ့ ဒေါ်လေး ဟုတ်ကဲ့ ”
ယောက်ခမလောင်းကြီးက အရင်ထဲက စိတ်ချပြီးသားပါ။ ကိုယ့်ဆို အရင်ထဲက ဘာသဘောတူသလဲမမေးနဲ့ အဲဒီတုန်းက ကိုယ်ကလည်း တင်မိုးနိုင် ရဲ့ဟာလေးကို အဲ အလှတရားတွေကို မသိတော့ ကြိုက်ရမှန်းတောင် မသိတော့ ဖုတ်လေတဲ့ ငါးပိ ရှိတယ်လို့တောင် သဘောမထားမိဘူး။ နောင်တရလိုက်တာ ကုန်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေကို။ ခုကြည့် ဟိုဘက်ကို လှည့်ထိုင်နေတယ်။ တချက်တောင် လှည့်မကြည့်ဘူး။ ကောင်းတယ် မကြည့်တာပဲ သူ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို သေချာအ၀ ကြည့်နေလိုက်တယ်...။
“ဘာလုပ်နေတာလဲ အမေမရှိဘူး ပြန်တော့ပါလား..”
“နင်ကလည်းဟာ ဒီမှာ ငါတရုတ်က၀ယ်လာတဲ့ အထည်တွေ.. နောက်...”
“ဟာ ... အဲတာတွေ မပြောနဲ့တော့ အဲဒီပစ္စည်းတွေ ပေးချင်ရင်ထားခဲ့ မပေးချင်ယူသွား ဒါပဲရှိတယ် နင်သွားတော့ ”
“ဘာလဲနင်ငါ့ကို ခုထိ စိတ်ခုနေတုန်းလား ငါ့ကို ဟိုနေ့က ဖြစ်သွားတယ် ဆိုတာက...ဟို...”
“အာ.. ငါမကြားချင်ဘူး အဲဒီစကားတွေ ငါလည်းမေ့ထားတယ် နင်လဲမေ့ထားလိုက်တော့..”
“စကားဆက်မပြောနဲ့ ဟာ နင်ပြန်တော့လို့ ငါပြောနေတယ်နော်..”
ဘယ်လိုကနေဘယ်လိုမှ စမရတဲ့အဆုံး တင်မိုးနိုင် အိမ်မှ ပြန်လာခဲ့တော့တယ်။ အလာတုန်းကလိုတော့ တက်တက်ကြွကြွ မရှိတော့ဘူး။
ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ တင်မိုးနိုင်ရယ်။ နင်တကယ်ပဲ အဲဒီစိတ်တွေမရှိတာလား ငါ့ကိုပဲမကြိုက်တာလား ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဟာ။ ငါ မွှန်နေတာလား အချစ်ဆိုတဲ့ နွံထဲမှာပဲ နစ်နေတာလား ဘာမှန်းကို မသိတော့ဘူး။ နင့်ကို မရ ရအောင် ကြိုးစားမယ်။ နင်ဘယ်လောက်တောင့် ခံနိုင်မလဲ စောင့်ကြည့်ရသေးတာပေါ့ ဟာ။
ဒီလိုနဲ့ တင်မိုးနိုင်နဲ့ မတွေ့ရတာ ၃ ရက်လောက်ကြာတော့ နေရထိုင်ရတာလည်းမကောင်းတော့ဘူး။ မနက်မနက် အိပ်ယာကနိုးလာလည်း ဒီစိတ်ပဲ စားလဲဒီစိတ်ပဲ လူတောင်နည်းနည်းကျလာသလို ခံစားရတယ်။ အလုပ်လည်း ပိတ်ရက်မို့ ပျင်းပျင်းနဲ့ မြို့ထဲပတ်ကားပတ်မောင်းရင်း ဟို အပေအတေကောင်မလေးကို သတိရမိတယ်..။ ဟာ..ဟုတ်ပြီ အေးဒီကောင်မလေး ဆီက ပန်းသွားဝယ်ပြီး တင်မိုးနိုင် အိမ်ကို ထပ်သွားမယ်.. ဟုတ်ပြီ။ ကားကို ဒဂုံစင်တာရှေ့ခပ်သွက်သွက်လေး မောင်းထွက်လာခဲ့တယ်။
ဒဂုံစင်တာရှေ့ရောက်တော့ သူ့ကိုမတွေ့ သူ့အမေဆိုင်ကိုတွေ့ပေမဲ့ သူက ဘယ်ပျောက်နေတာလဲ။ ခဏစောင့်ကြည့်ပေမဲ့ ပေါ်မလာတဲ့ အဆုံး မြေနီကုန်းဘက်ကို လှည့်ပြန်လာခဲ့ တယ်။ တိုက်ဆိုင်တာပဲ လားမသိဘူး။ မြေနီကုန်းပန်းခြံနားက ဖြတ်ကျော်သွားတော့ ဟို အပေအတေမလေးကို ဖျတ်ကနဲ့ တွေ့လိုက်တယ်။
ကားကို ရပ်ပြီး ကားနောက်ကြည့်မှန်ကနေ သူလားလို့ သေချာကြည့်မိတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်သူပဲ ကောင်လေးတယောက်ကို လက်လေးချိတ်ရုံတင်မကဘူး ခါးကိုပါ ဖတ်ထားတယ်။ ကျွန်တော့ကားနားက ဖြတ်တော့မှ ကားမှန်ကို အမြန်ချပြီး ဘာကြောင့်မှန်းမသိ လှမ်းခေါ်မိလိုက်တယ်။
“ဟယ် ..ဦးလေး... ဘယ်သွားမလို့တုန်း...”
ပန်းခြံထဲက ထွက်လာတယ်ဆိုတော့ တော်တော်အခြေအနေကောင်းလာပုံရတယ် ထင်တယ်။ သူမေးတာကို ပြန်မဖြေသေးပါဘူး သူ့ကိုကျွန်တော်သူးစမ်းသလိုလို အထင်သေးတဲ့ အကြည့်လိုလိုနဲ့ ကြည့်လိုက်တယ်။ ကောင်မလေးက ချောချင်ပါတယ် တင်တွေရင်တွေနဲ့ ဆွဲဆောင်အားကောင်းမယ့် ရုပ်ပါပဲ။ ကိုယ့်ရုပ်ရည်လေးမှ အားမနာ သူနဲ့တွဲနေတဲ့ သူနောက်က ကောင်လေးကိုကြည့်အုန်း ပန့်လိုလို ရော့လိုလိုနဲ့ နားတွေကလည်းဖောက် ဆံပင်ကလည်း စိမ်းနေတယ်။ တကယ့် ခပ်စုတ်စုတ်ထဲကပါပဲ။ ကျွန်တော် သူ့ကောင်လေးကိုကြည့်နေတာသဘောပေါက်ဟန်တူပါတယ်။
“အဲဒါ နောက်တယောက်လေ အရင် ကောင်က သိပ်မချေငံလို့ ၀ဲလိုက်ပြီ...ခိခိ ”
ဟာလွယ်လိုက်တာနော် မိန်းကလေးတွေများ ဆက်ပြီးစကားပြောချင်စိတ် မရှိတော့လောက်အောင်ပဲ ငါနဲ့ ဒီလိုအဆင့်ရှိတဲ့ မိန်းကလေးမျိုးနဲ့ ဘာမှပြောဆိုဆက်ဆံနေစရာတောင် မရှိဘူး။
“တူတယ်လို့ ကြည့်နေတာ ဘာမှတော့ မဟုတ်ပါဘူး...ပန်းမရောင်းတော့ဘူးလား ”
“မရောင်းတော့ဘူး ဦးလေးရာ အခု သမီး ထီရောင်းနေတယ်လေ ဒီနေ့ နားရက်ရတာနဲ့ လန်းနေတာ.. အဟဲ..”
“ကောင်းပါပြီဗျာ ကဲ... ဦးလေး လုပ်စရာရှိလို့နော်... ဘိုင့်ပါ..”
ဟုပြောပြီး ကားမောင်းထွက်လာခဲ့တယ် ။စိတ်ပြေလက်ပျောက်မလားလို့ မြို့ထဲလျောက်သွားပါတယ် စိတ်ပျက်စရာတွေနဲ့ ကြုံနေပါလား.. တော်ပြီ နောက်တခါ ဒီလိုကောင်မလေးတွေနဲ့ မဆက်ဆံတော့ဘူး။ ရှုပ်တယ်။
“သမီး မောင်မျိုးကျော် ပြန်သွားပြီလား..”
“သူ့ ကြည့်ရတာ မျက်နှာလည်း မကောင်းပါလား နင်တို့ ဘာဖြစ်ကြပြန်တာလဲ ..”
“ဟာ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး အမေရယ်... စိတ်ညစ်ရတဲ့ အထဲ ”
“မိ.. တင်မိုးနိုင် ညီးကို ငါပြောမယ်နော် ငါမပြောချင်လို့ ကြည့်နေတာကြာပြီ ငြီးကိုငြီးကလေးများ မှက်နေလား အသက်က ၃၅ရောက်နေပြီ။ ငါကတော့ နင့်အတွက် ယောကျာ်းရှာ မပေးစားနိုင်ပေမဲ့ နင့်ကိုတော့ ယောက်ျားယူစေချင်တာတော့ အမှန်ပဲ...”
“ ဟာ အမေကလည်း ...သမီး ယောကျာ်း မယူချင်ဘူး ..”
“ညီး ... ဘာမာန်တက်နေတာလဲ ညီးအဖေမရှိထဲက ငါက မုဆိုးမ သမီးကတယောက်ထဲ တံခွန်မရှိတဲ့ ရထားမတင့်တယ်သလို ယောကျာ်းမရှိတဲ့ငါတို့ မှာ ဘယ်လောက် လူကြားသူကြား မျက်နှာငယ်ရလဲ နင်က ဆယ့်ခြောက်နှစ်သမီး မဟုတ်ဘူး ခုဟာက ရိပ်သာကို လှမ်းနေပြီ ...။ ကဲ ....ပြောစမ်းပါအုန်း မောင်မျိုးကျော်မှာ ဘာအပြစ်ရှိလဲ ပြောစမ်း..”
“တော်တော့ မိဘတွေက နိုင်ငံခြားမှာ ချမ်းသာလိုက်တာ ကျိကျိတက် သားလေးတယောက်ထဲ မျက်နာမငယ်ရအောင် ဆိုပြီး ဟိုကပို့လိုက်တာတွေကလည်း အစုံ ..ဒီလောက်ချမ်းသာတာတောင် သူက ၀န်ထမ်းအလုပ်ကို လုပ်သေးတယ် စိတ်သဘောထား ရိုးသားတယ် နင်တို့လည်း သိလာတာ ကျောင်းထဲက ၁၀ နှစ်တောင်ကျော်လာပါပြီ.. ငါကြည့်နေတယ် တနေ့တော့ အဆင်ပြေလာနိုးပြေလာနိုးနဲ့ အရင်တုန်းက အိုးကလည်းမလှုပ်လို့ စလောင်းကလည်းမလှုပ်ဘူးဆိုတာကို လက်ခံတယ် ခုဟာ စလောင်းကြီးကိုတိုင်လှုပ်နေတာတောင် အိုးက မရွဖြစ်နေတာတော့ ငါဟယ် အံ့သြတယ်...”
“အမေရယ် ...ဒီ အသက် ဒီ...”
“ညီး ... ဆက်စကားမရှည်နဲ့ ...ဒီတခါ မောင်မျိုးကျော်လာရင် ကောင်းကောင်းဆက်ဆံပါ....ဒါပဲ..”
၀ူးးး အမေကတော့ သူပြောချင်ရာ စွတ်လွှတ်သွားပြီး သူ့စလောင်းကြီးက ငတုံးငအကြီးမှန်း သူက ဘာမှန်းမသိ အိမ်လာတောင်းပန်တယ် တဲ့။ ကြည့်အုန်း ဒီကမိန်းကလေးမှာ ရှိသမျှအရှက် အကုန်သူ့ကိုပေးထားပြီးသား ဒီမှာလည်း ရှက်လို့သေတော့မယ် နားလည်မှပေါ့ ကိုယ့်ကမျက်နာဟိုဘက်လှည့်ထားရင် လှည့်တဲ့ ဘက်ကို လာတောင်းပန်မှပေါ့ အရင်လို စသလိုနောက်သလိုနဲ့ လက်လေးဘာလေး လှမ်းကိုင် အတင်းအကြပ်တောင်းပန်မှပေါ့။ နင်အဲလိုလုပ်လို့ ငါက ခုနှစ်အိမ်ကြားရှစ်အိမ်ကြား ကယ်ကြပါရှင်လို့ အော်ရမှာလား ငတုံးရဲ့ နင်နဲ့ငါ ပွင့်လင်းခင်မင်မှုအတိုင်းအတာက သူများတွေထက်ကြီးတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့ဟာ... အင်းဘာပဲ ပြော မျိုးကျော်လာရင်တော့ အမေပြောသလို ကောင်းကောင်းဆက်ဆံရမယ် တောင်းလည်း တောင်းပန်ရမယ်။ ဟုတ်ပြီ။
မိမိကိုယ်ကို မှန်ထဲ ပြန်ကြည့်မိနေသည်။ ဟိုဝတ္တုတွေထဲက ဇာတ်ကောင်မင်းသားလို့ အရပ်မြင့်မြင့် မျက်ခုံးကောင်းကောင်း မေးရိုးကားကားတွေကို ငါလဲပိုင်ဆိုင်နေတာပဲ။ ခုမှ အသက် ၃၇ ဆိုတာ တကယ့်အရွယ်ကောင်းပဲ။ တင်မိုးနိုင်ဘာလို့များ ငါ့ကို ခါးခါးသီးသီးဆက်ဆံနေရတာလဲဆိုတာနားကိုမလည်ဘူး။ ဒီအချိန် တင်မိုးနိုင် အမေကြီးတော့ မရှိလောက်ဘူးထင်တယ်။ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် တဆင့်တက်နိုင်အောင်တော့ လုပ်ရမယ်။ ခုပဲသွားမယ်ကွာ။
ဒီလိုနဲ့ တင်မိုးနိုင်တို့ အိမ်ဘက်ကို ထွက်လာတော့ ကံဆိုးချင်လို့လား ကံကောင်းချင်လို့လား မသိ အိမ်ပေါက်ဝတင် တင်မိုးနိုင်တို့ အမေနဲ့တည့်တည့်တိုး ပါလေရော။ သူဘယ်က ပြန်လာတာလဲတော့မသိဘူး။ ၀ူးး...ဒါဆိုရင် ဒီအဖွားကြီး အိမ်မှာ ရှိအုန်းမှာပဲကွာ..။
“အဒေါ် ဘယ်ကပြန်လာတာလဲ ခင်ဗျ ..တင်မိုးနိုင် ရှိလား။ အိမ်မှာ သက်သာရဲ့လား။ အလုပ်လည်း မဆင်းနိုင်သေးလို့ စိတ်ပူပြီး လာကြည့်တာပါ..”
“အယ် ...မောင်မျိုးကျော် အဒေါ်ဘယ်ကမှ ပြန်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခြံတံခါး သော့ခပ်ဖို့မေ့နေလို့ ပြန်လာခဲ့တာ သမီးအပေါ်ရှိတယ်...”
အဖွားကြီး လိမ်ပြီ။ သူ့သမီးနဲ့ နှစ်ယောက်ထဲ အတူရှိစေချင်နေတာ သိသာနေပြီ ..
“ကဲ အဒေါ် ဟိုဘက်ရပ်ကွက်က မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့ သာရေးရှိနေလို့ သွားမလို့... မင်းသူငယ်ချင်းကို ကြည့်ထားအုန်းနော်..”
“ဟုတ်ကဲ့ ဒေါ်ဒေါ် ... အော်..ဒေါ်ဒေါ် ကျွန်တော့ ကားနဲ့ လိုက်ပို့ရမလားးး...”
“နေပါစေကွယ် နေပါစေ.. ဒီဘက်အိမ်က အဖော်တယောက်ပါ ၀င်ခေါ်ရမှာမို့.. သွားသွားအိမ်ပေါ်ကို ..သမီးရှိတယ်..”
သုတ်သုတ်နဲ့ လစ်သွားပြီ အဖွားကြီးတော့။ ဂွင်ပဲ... အိမ်ပေါ်ကို တချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ် တင်မိုးနိုင်ရေ နည်းနည်းတော့ ရုန်းကြည့်ဟာ ဟုစိတ်ထဲမှာ ပြောရင်း အပြုံးလေးနဲ့ အိမ်ပေါ်ကိုတက်လိုက်တယ်။
“တင်မိုးနိုင် ရေ.. တံခါးလေးတော့ လာဖွင့်ပေးပါအုန်း ဟ..”
အင်း...နည်းနည်းတော့ ပြောင်းလဲနေတယ်။ အရင်လို စူပုပ်တော့မနေတော့ဘူး အိမ်တံခါးဖွင့်နေတဲ့ အချိန်မှာ မျက်နာတော့ နည်းနည်းလေး အောက်ကို ငုံထားတယ်ပြီး ပြုံးသယောင်ယောင် ... သော့ကိုင်တဲ့ လက်တွေ ကတုန်ကယင်နဲ့ တုန်နေတာကို သတိတော့ထားမိတယ်။ ဘာမှပြောမနေတော့ဘူး ထုံးစံအတိုင်း ဧည့်ခန်းက ခုံမှဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။
တချက်ဆတ်ကနဲ မော့ကြည့်လိုက်တယ် သူကျွန်တော့်ကို ကြည့်နေရာကနေ အောက်ကို ရွေ့ကြည့်တာတွေ့လိုက်ရတယ်.။. အံ့မယ် တင်မိုးနိုင်တို့အပိုးကျိုးပြီး တယ်လည်း ဧည့်ခံကောင်းနေပါလား အံ့သြဖို့ကောင်းလိုက်တာ။ ခေါင်းကနေ ခြေဖျားဆုံးထိ သေချာကြည့်လိုက်ပြီး...
“သံပုရာရေ အေးအေးတခွက်လောက် သောက်ချင်လိုက်တာ..”
ဘာမှ ပြန်မပြောဘူး ထွက်သွားပြီ။ မီးဖိုချောင်ကို ကျောပေးပြီး လျောက်သွားတဲ့ ဒီခန္ဓာကိုယ်ကို ခင်လာတဲ့ သက်တမ်းအတွင်းမှာ ပထမဆုံးမြင်ကွင်းလားတင်ကြီးကို ၀င်းနေတာပဲ..စိတ်ထဲ နွေးကနည်း ဖြစ်သွားလို့ တခါထဲ ထလိုက်သွားမိတယ်။ မီးဖိုချောင်ထဲရောက်တော့ သူသံပုရာသီးကို လှီးနေပြီ။ ကျွန်တော့်မြင်တော့..
“နင် ဖျော်တာကို ကြည့်ချင်လို့ ..ဟီးဟီး..”
စကားလေးတပြောပြောနဲ့ သူ့ကျောနောက်ကို ရောက်တော့ ဆတ်ကနဲ ကောက်ဖက် လိုက်တယ် ကျွန်တော့လက်နှစ်ဖက်ကို သူ့ချိုင်းအောက်ကနေလျှိုပြီး နို့အုံကို တခါထဲဖမ်းကိုင်ထားသလို သူတင်ပါးဆုံနှစ်ခုကြားထဲကို ကိုယ့်အချောင်းနဲ့ ကွက်တိအံကိုက်ကျအောင် အတင်းဆွဲချုပ်ထားလိုက်တော့တယ်။
“အာ.... မသာ လွှတ်နော် မျိုးကျော် .. နင်ဘာလုပ်တာလဲ ... ဘာလဲ ဒါ ယုတ်မာတယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးလား...”
ပြန်သာပြောနေပေမဲ့ ဘေးအိမ်တွေကြားမှာ စိုးလုိ့ထင်တယ် အသံထွက်တယ် ဆိုရုံလေးပါ.. ကျွန်တော်ကတော့ လုပ်စရာရှိတာ တခါထဲလုပ်ထားမှ သူ့ကို ခုထဲက အတွေ့အထိတွေပေးထားမှ ဖြစ်မယ်။ ကိုယ့်အောက်က အချောင်းကို သူ့ဖင်ကြားထဲမှာ အထက်အောက် စုန်ဆန်လေး အသာအယာလုပ်နေတော့ တင်မိုးနိုင်ခမျာ ရင်တွေတဒိုင်းဒိုင်းခုန်နေတာ ကိုယ်တောင် ခံစားနေရတယ်။
သူ့လက်တွေကလည်း သူ့နို့ကိုကိုင်ထားးတဲ့ ကျွန်တော့လက်တွေကိုပဲ ဆွဲခွာရမလား သူ့တင်ကြားထဲမှာ ထပ်နေတဲ့ ကျွန်တော့ အချောင်းကြီးကိုပဲ ဆွဲဖယ်ရမလား ဟိုဟိုဒီဒီလျောက်စမ်းနေတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဒီလို ပထမဆုံး လုပ်ဖူးတော့ အရမ်းကို အရသာတွေ့လှတယ်။ လုပ်ရင်း သူ့ထမီအပေါ်တက်လာပြီး ဒူးတောင် ပေါ်လာတယ်။ ဆတ်ကနဲ နို့ကိုကိုင်ထားတဲ့ လက်တဖက်ကပေါ်နေတဲ့ ဒူးအထက်က ထမီစအောက်ကိုလျှိုပြီး ပေါင်းသားတွေကို စစမ်းလိုက်တော့တယ်။
“တော်သင့်ပြီ တော်သင့်ပြီ မျိုးကျော်ရယ် ”
တင်မိုးနိုင် သမင်လည်ပြန် မျက်နှာလေးလှည့်ပြီး ပြောလာတော့ သူ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော့် ရင်ထဲထိတ်ကနဲ့ ဖြစ်သွားတယ်။ ဆံပင်တွေ ပြေကျနေပြီး မျက်နာတခုလုံး သွေးရောင် သန်းနေသလို မျက်ရည်တွေကလည်း အပြည့် နှုတ်ခမ်းတွေလည်း တဆတ်ဆတ် တုန်နေတယ်။
သူတော်တော့်ကိုကြောက်သွားတာပဲ။ ကြည့်နေရင်း သူအရုပ်ကြိုးပြတ်ကျသွားသလိုပါပဲ ကြမ်းပေါ်ကို ပုံ့ပုံ့လေး ဖြစ်သွားတယ်။
ကျွန်တော်လည်း ခေါင်းကြီးသွားတယ်။ တော်သေးတာက မေ့တာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ သူတော်တော်လေး ခံစားမှုပြင်းထန်လို့လား အရှက်ကြီးသွားတာလား အကြောက်ကြီးတာလား မသိ။ သူ့ပုံစံက မူမမှန်တာတော့ သေချာတယ်။
ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ဒီထက်ပိုမလုပ်သင့်တော့ဘူးဆိုတဲ့ အသိက ဦးနှောက်ထဲ ဒိုင်းကနဲ့ ၀င်လာတယ်။ အလိုက်သင့်လေး သူ့ကိုပွေ့ချီပြီး ဧည့်ခန်းထဲက ခုံပေါ်တင်ပြီး စောစောက တ၀က်တပျက်ဖျော်ထားတဲ့ သံပုရာဖျော်ရည်ကို ဆက်ဖျော်ပြီး သူ့ကို တိုက်မယ်လုပ်တော့ မသောက်ဘူးဆိုပြီး ခေါင်းခါပြတယ်။
“နင့်ကို ငါပြောနေတယ်နော် .. နင်ပြန်တော့လို့ .. နင် ငါ့ကို ယုတ်.......”
စကားတောင် ဆုံးအောင်မပြောတော့ဘူး မျက်နာကို လက်နှစ်ဖက်အုပ်ပြီး ချုံးပွဲချ ငိုပါနေတော့တယ်။ ကျွန်တော် တော်တော်လေး စိတ်ဓာတ်ကျသွားသလို စိတ်လည်းမကောင်းဖြစ်မိသွားတာလား။ နောင်တရတာလား ခွဲခြားမရဘူး။ တင်မိုးနိုင်နဲ့တော့ ငါနဲ့ မဖြစ်နိုင်ဘူး ထင်ပါတယ်လေ။
“နင်..... နင် နဲ့ ငါ..ဘယ်...တော့ မှ အပေါင်းအသင်း မလုပ်တော့ဘူး... နင် ငါ့ဆီ လာစရာ မလိုတော့ဘူး...”
ငိုသံကြီးနဲ့ စကားလည်း မပီတော့သလို သူတော်တော် စိတ်ကုန်သွားတာ ဖြစ်မယ်။ ပြီးသွားပြီ ထင်ပါတယ်. ဒီထက်ပိုမဆိုးခင် ပြန်တာပဲကောင်းပါတယ် ဆိုပြီး ကျွန်တော် တင်မိုးနိုင် အိမ်မှ ထွက်လာခဲ့တော့တယ်။
လူနာကုတင် ၃၁ (အပိုင်း ၂) ဆက်ဖတ်ရန် »